FAQ-Nantong GAOYA UBUME SENTSIMBI CO., LTD.
Wena yezandla mveliso okanye inkampani?
Thina yezandla mveliso. Wena bamkelekile ukuba eze kuthi nangaliphi na ixesha. Kwindawo yokusebenzela,unenkqubo izixhobo phambili epheleleyo ekwenzeni izakhiwo zentsimbi kunye panels. Ukuze sikwazi ukuqinisekisa umgangatho elungileyo kwaye amanani abiza.
Yini ukhethe ukuba?
Ekubeni nghena kwimarike yamazwe ngamazwe, siye sibe kwamaqabane abaninzi companies.Partner yorhwebo langaphandle ukusuka Wathi uSirayeli,"Sikhetha ukuba nje kuphela ngenxa ixabiso nomgangatho,kodwa uxanduva lwakho nokunyaniseka bafanelwe ukuba umhlobo wam ethembekileyo. "
Kuthekani ukulawula wakho umgangatho?
Ekuqaleni,iimveliso yethu isangene CE EN1090 kunye ISO9001:2008,leyo ethetha iimveliso zethu ziye sivavanywe wesithathu party.And phambi kokuba nifake imveliso,zonke izinto raw kufuneka ivavanywe kwimveliso advance.During,esinayo uthotho lwamaxwebhu index processing, abasebenzi ziyaphunyezwa ngokumalunga nemigangatho kweliso nemveliso ulawulo personnel.After umgangatho,sibe iinjineli ukukhangela umgangatho kwaye athathe uxanduva lo.
Indlela ukufumana ecaphula kuwe?
Ungaqhagamshelana nathi ngalo naliphi na ixesha nge Email, WhatsApp, Skype kunye nezinye iindlela,kwaye sinike inkcazelo esisiseko ezinye,ezifana ubungakanani ngqo lwesakhiwo,ubukhulu nobungakanani iingcango neefestile,umbandela ofuna ukuyisebenzisa iindonga roof.After ukuba,siya kukunika ixabiso okuyona 30 minute.If kufuneka ukwazi iinkcukacha ezingaphezulu,makhe sixubushe ezinye.
Ngaba unikele inkonzo yoyilo?
Ewe,sinawo iqela yinjineli kwaye bayile ngenxa kwakho umzobo wakho requirements.Architectural,isakhiwo yemizobo,processing iinkcukacha lokuzoba nofakelo umzobo iza kwenziwa kwaye uyaqinisekisa ngexesha ezahlukeneyo yeprojekthi.
Ixesha lonikezelo kuxhomekeke kubungakanani kunye nobungakanani building.Generally ngaphakathi 30 iintsuku emva kokufumana payment.And ngolwandle inxenye evumelekileyo ukuze enkulu.
Ngaba unikele inkonzo ukuze ukufakwa?
Kwakhona Yes.We kuba iqela ufakelo abroad.Firstly,ziya kunikwa imizobo ufakelo phambi kokuba iimpahla kwindawo port.If udinga,sinako amalungiselelo iinjineli ukuba benze ukufundiswa kwiprojekthi iprojekthi site.For enkulu kunye neemfuno abathengi ',singakwazi ukubonelela iqela leprojekthi lonke.
Yintoni igama elithi yentlawulo?
30% ngotyalo 70% imali eseleyo phambi ukuthunyelwa.